Ruo ókè ha a leaa ka ihe nchịkwa brek ga-adị site na njide? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ọnọdụ mgbapụta igwe kwụ otu ebe - mkpebi ndị bara uru
Ọnọdụ mgbapụta igwe kwụ otu ebe - mkpebi ndị bara uru
Ruo ókè ha a leaa ka ihe nchịkwa brek ga-adị site na njide?
Ọtụtụbrekịn'oge a dị ike iji kwe ka otu mkpịsị akabraking, ma iji nweta ntọala zuru oke ịkwesịrị ịmalite na aka gị. Dị ka o kwesịrị, ịchọrọ iji aka gị na-agba ịnyịnya nso nso nke ogwe gịnwere ike- ahapụla ihe karịrị 10mm na-egosi.Mar 13 2018
N'isiokwu a, anyị ga-aga site na nkwụsị igwe mkpuchi na idobe na nkwụsị aka. Nzukọ breeki na nkwụsị bụ akụkụ nke usoro isiokwu anyị - The Park Tool Guide to Rim Brakes, lee isiokwu a ka ị hụ otu anyị siri hazie ọdịnaya ahụ. Ma ọ bụghị ya, ka anyị bido.
Ndewo Calvin Jones ebe a, si na Park Tool Company. Nke mbu, ka anyi gabiga ngwa oru na ngwa ndi ichoro. Allen igodo iji mee ka ihe nkedo ahụ dịkwuo mma, ọnụ dị mma iji dozie elu, eriri iji dozie otu ihe ahụ na-agba ọsọ na eriri aka na-eme ka eriri.
A na-adọta teepu a na-etinye na nkedo na isi nkedo na-abụkarị n'okpuru ihe mkpuchi roba. Usoro izizi ga - ahụ ọnọdụ nke ịghasa isi. Ọnọdụ nke nkedo nkedo ahụ dị mma nke ukwuu maka ihe mgbazinye ọkụ na-agbanwe agbanwe site na SRAM ma ọ bụ Shimano, nke na-agbazi eriri ndị ahụ na njikwa ahụ wee mechie ya na teepu njikwa.
N'ọnọdụ abụọ ahụ anyị na-adọta mkpuchi roba n'ihu, na n'azụ ya anyị na-ahụ ihe mkpuchi oghere nke na-adọta eriri ahụ. Site na sistemụ SRAM, dọrọ okpu rọba ihu, nke a bụ isi ihe ị na-achọ, mee ka o sie ike ka ọ kwado ma ọ bụ bulie ya. Na Shimano hydraulic lever, ihe nkedo nkedo dị n'akụkụ. Na SRAM hydraulic lever, anyị na-atụgharị ihe mgbochi roba na-aga n'ihu.
Isi ịghasa elu. Na microSHIFT ejiri breeki / mgbanwe lever, Anam Udeme hundu n'ihu na-egosi ihe ọ bụla. Nke a nwere oghere oghere site n’ihu.
A na-etinye eriri ahụ, ị ​​na-eche maka isi oghere hegagon, na ọ bụ ebe a na-eme nchebe. N'ihe banyere ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka ọ ghara ịdị na-eme, nke bụ naanị ndị na-atụgharị breeki na-enweghị ịgbanwee nhọrọ, isi nkedo a na-adịkarị n'etiti etiti ahụ site na mkpịsị aka ahụ na igodo Allen. Maka atụmatụ Shimano nke na-agbanwe mgbagharị / breeki levers mana na-agbazi ụlọ na-agbanwe agbanwe na mpụga, ọ bụghị n'okpuru teepu ahụ, jiri oghere oghere dị na mpụga ahụ.
Mkpịsị Allen na-agafe ebe ahụ wee daba ebe ya na isi ịghasa na esemokwu ahụ. Jiri Campagnolo brake / shift lever Integrated system, tụgharịa mkpuchi roba n'ihu ma kpughee isi arịgo ahụ n'elu ahụ. Site na atụmatụ aghụghọ, ikpe ahụ gbagoro, ọ gaghị n'okpuru teepu ahụ, kama ọ bịara na nkwụsị ikpe ahụ.
Lee anyị chọta mkpọchi n'ime. Iji wụnye ndị na-ebugharị ihe na mpempe akwụkwọ, kpughee eriri eriri ahụ, mana kpachara anya - egbula ya nke ukwuu na eriri ahụ ga-adapụ. Dozie eriri ahụ mgbe ọ na-atasị, slịa lever n'ime ọnọdụ anyị chọrọ ma mee ka ihe nkedo ahụ sie ike, mana ọ bụghị nke ukwuu na anyị enweghị ike idozi ya ma emechaa.
Tinyegharịa usoro ahụ n'akụkụ nke ọzọ. Mgbe emechara levers abụọ, dozie ịdị elu. Ọchịchị dị mma nke isi maka ịdị elu bụ iji zoo aka na nsọtụ ala nke dobe ahụ.
Gbatị ahịrị ahụ nwere ihu kwụ ọtọ - sịnụ, eriri akwa isi. Anyị na-adọta na akụkụ ala ahụ, mee ka ọ dịkwuo ogologo, wetara onye na-achị ọnụ ụlọ ya na onye na-achị anyị. Anyi agbadaala ebe a.
Nke ahụ bụ ezigbo omume izugbe. Nwere ike ịgbanwe ọnọdụ a, ma enwere ihe kpatara ịme ya. Ka ị na-arị elu, ndị levers ahụ dị mfe ịnweta site n'elu.
Ha na-esitụrụ ike ike ịpụ site na tụlee tọọ menjuobi ntakịrị ala, ebe a ka anyị mere ka menjuobi dị mfe iru mgbe anyị dara ebe a, mana ọ na-adịkarị obere ihere mgbe ị biliri. Maka igwe kwụ otu ebe a, anyị ga-edozi ha ihu igwe. Tupu i mee ka ha sie ike, mee nlele dị elu.
Nke a bụ ebe mpempe eriri ma ọ bụ ọbụna ntụgharị ma ọ bụ eriri breeki na-abata. Debe eriri ahụ ma debe ya n'ebe ndị yiri ya na mpempe akwụkwọ abụọ ahụ ma jiri ya dị ka onye na-achị achị ma jiri njikwa aka dị ka ahịrị, lee na ọ dị ka onye na-achị anyị dị ka akara. Ebe anyị nwere ike ịhụ na anyị anọghị.
Nri ụtụtụ calorie 600
Ekpe aka ekpe nke onye ọkwọ ụgbọala dị oke elu ma ọ bụ nke aka nri nwere ike ịdị obere ala. Na-esote, lelee aka ndị na-ejide aka ma lelee ntụgharị nke ihe mgbaji abụọ ahụ. Anyị chọrọ ka ha dịrị ka ibe ha na etiti ụgbọ elu nke igwe kwụ otu ebe, yabụ na nke a bụ ebe anyị ga-adọta nke a ntakịrị, anyị ga-ama ezigbo mma, mgbe ndị levers ahụ mechara kwekọọ ọ bụ oge zuru oke ikesiike ha, ndị na-emepụta na-atụ aro Torques nwere ike site na 6 ruo 10. ezuru Newton mita, nke ahụ bụ ihe dị ka 90 inch pound.
Ọnọdụ nke isi ịghasa na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ịbanye na ncha mgbochi, yabụ ikike a na-ahụta bụ aka bụ echiche dị mkpa. Jiri nke nta nke nta mee ka menjuo ahụ sie ike. N'ebe a, iji eriri carbon na / ma ọ bụ ahụ plastik, anyị chọrọ ọnụọgụ zuru ezu ka ọ ghara imegharị.
Ọ bụrụ na m nwere ike mfe inupụ menjuobi, na ọ bụ kwa omume rụrụ. Nọgide na-adọta. Ugbu a, o siri ike ịkwaga, nke ahụ ezuola.
Nke ahụ bụ usoro bụ isi maka nzukọ breeki menjuobi na ịhazi maka ịgba ọsọ njikwa. Ngalaba na-esote na usoro anyị nke brek brek na-emekọ ihe banyere mgbakọ nke ụlọ na eriri. Enwere isiokwu abụọ ịhọrọ site na ịdabere ma ị na-arụ ọrụ na ogwe osisi kwụ ọtọ ma ọ bụ dobe ogwe.
Lee edemede a ka ị kowara otu anyị siri hazie ọdịnaya nke usoro a. Daalụ maka ikiri ma hụ na ịdenye aha na akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na Parktool.
Kedu akụkụ nke breeki ihu n’elu igwe kwụ otu ebe n’elu ugwu?
Nabata gị Jụọ GMBN n'izu a ebe anyị na-anwa ịza ajụjụ ajụjụ igwe gị niile. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, hapụ ha na ngalaba nkọwa dị n'okpuru, anyị ga-agụ ha ma ị nwere ike izipu ha ozi mgbe niile ask@gmbn.com Bido nke ahụ site na ajụjụ Henry Kuemmel, ọ bụ maka ịnyịnya ígwè anyị.
Ọ na-ekwu 'Hụrụ Channel ahụ n'anya', ekele maka nke ahụ, 'Ana m eche echiche maka ịga ọnwụnwa,' Ntụziaka igwe kwụ otu ebe ọ bụla? ' - M na-ekwu banyere ikpe anyịnya igwe na Martin, n'ezie. Ee, ọ na - ekwu maka Inspired Hex, nke bụ igwe ịnya igwe elekere iri abụọ na isii. Yabụ na ọ mara mma nke ukwuu ka ị nwee ike ịwụli elu ya wee mee ihe ndị ọzọ, ọ nwere oche ọ na - edochi anya ya ka ị nwee ike pụọ na ịrapara na ịnyịnya ebe gị na - agba ịnyịnya igwe, ọ bụghị elekere 20 ma ọ bụ ihe nzuzu? - Ee e, ọ dị ka ihe Dan MacAskill na-anya, mana ọ bụ nnukwu ụdị - Dịka Martin na-ebu ọtụtụ ihe m chere - echere m ee ee, ụdị igwe kwụ otu ebe, ee - dị mma, aka nri, ajụjụ na-esote na-abịa si Darren James, ọ zụtara igwe kwụ otu ebe mbụ ya na June, ọ bụ Voodoo Hoodoo hardtail ma chọọ ịma ma ọ nwere ike wepu ya derailleur na-enweghị agbanwe crank ozugbo .- Ee, ị nwere ike, mana ma eleghị anya ị chọrọ ma a n'ihu yinye ndu ka jide ihe a na-agbụ, ma ọ bụ ihe nkedo sara mbara.- Ya mere --- Ya mere, dị warara, sara mbara Chere obere oge, atọ sara mbara nke atọ, yabụ gịnị ka ị mere ht, ị ga-ahapụ mgbanaka ahụ n'etiti ọnọdụ? - Kwesịrị ịdị n'etiti, ee. - Nye onwe gị ezigbo eriri igwe. - Ee, ma otu n’ime nhọrọ abụọ a, ma obu ihe nkedo ohuru ma ọ bụ ụdị ndu ndu.
Mana ọ ga-achọ naanị ntuziaka maka usoro mgbago dị elu ka ha wee ghara ịdị oke ọnụ, n'ezie ọnụahịa yiri nke ijikọta ihe. - Ọ bụ eziokwu, ọ bụ ezigbo ajụjụ. Diego kwuru 'Aghọtaghị m ihe kpatara nnukwu' rotor 'ji nọrọ n'ihu, ka anyị kwuo 200 mil rotor n'ihu' na 180 mil n'azụ. 'Ọ na-agba ọsọ ike ndọda enduro ụzọ ụkwụ na ya isi breeki bụ n'azụ. 'Ka m na-eme ihe na-ezighi ezi?' - Echeghị m na ọ na-eme ihe na-ezighi ezi, mba n’ihi na echere m na ọ dabere n’ihe ị chọrọ, mana buru n’uche na mgbe ị rutere n’ugwu, ị ga-ebu ibu karịa n’ịga ụkwụ gị, yabụ na ị ga-enwekwu traktọ, enwere ike ijikwa ike ebe ahụ- - M jụrụ onwe m nke a.
Amaghị m, ọ ga-amasị m ịnwale ule n'ezie ịhụ ya n'ihi na ndị mmadụ na-ekwu na breeki n'ihu na-akwụsịkarị nke kachasị, mana n'ọnọdụ a achọpụtara m na ọ bụrụ na ụkwụ ihu gị na-amị amị, o doro anya na ị nọ na nsogbu, yabụ m -eche na ị ga-agbasaghị preload n'azụ wheel a obere ihe. Echere m na anyị kwesịrị ime otu edemede banyere ya ma nwalee nke breeki bụ n'ezie, ka anyị kwuo na ọ na-akawanye ọkụ ka anyị wee mara nke kacha arụ ọrụ. - Echere m na ọ dabere na ụzọ ụzọ ndị ị na-agba.
Dị ka mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè? Echere m na ị tinyere breeki azụ na ezigbo ike. - Ee, aka nri. - don't naghị eji brake n’ihu eme ihe n’ezie. - Echere m na anyị kwesịrị ịme ule ole na ole. - Ee. - Kay, Josip Glasnovic. ' 'Enwere m ajụjụ' maka anyị.
Maka gị. 'Anụrụ m ebe ọ bụla na freewheel siri ike dị mma ma dịgide adịgide. Ọ bụ ya ka ọ bụ? Kedu ihe kpatara ụfọdụ ji eme mkpọtụ na ụfọdụ adịghị? - Ọ bụchaghị na ọ dị mma karịa ma ọ bụ na-adịgide adịgide, ọ bụ naanị na ọtụtụ ndị ka mma na-ada ụda - Ọ bụ ụdị akara ụghalaahịa - Isi iyi siri ike karị.
Ma enwere atụmatụ ndị ọzọ yabụ na ị nwere mkpanaka nke na-arụ ọrụ dị ka usoro ratchet, ọ nwere mmiri siri ike na ọ pịa, nke ahụ bụ ihe ị nụrụ banyere atụmatụ dị ka ogige ndị DC, ha nwere dịka otu mkpịsị ụkwụ, yabụ na ị nwere diski abụọ ma ha snap n'ime ibe ha. - Ee.- Ha dịkwa ezigbo jụụ, mana ha dịka ntụkwasị obi, yabụ na ọ bụghị mgbe niile.- Ekwenyesiri m ike na ajụjụ a anaghị emetụta anyị Jụrụ maka nke mbụ oge, mana --- Ma ha dara ụda nke ọma.- Dị ka onwe gị.
John Bradbury jiri igwe kwụ otu ebe wee zụta igwe kwụ otu ebe. Ọ bara uru itinye nwamba mmiri na igwe kwụ otu ebe ebe ọ na-agba ọtụtụ, na-agbagharị ọtụtụ? - Aghọtaghị m ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na ọ dabara, ọ bụrụhaala na ị nwere ike ịkwatu ya nke ọma - Nke ahụ ga-abụ nsogbu m, ee, ọ dabere, n'ihi na ịchọrọ --- Ọ dabere na atụmatụ gị, ọ bụghị ya? - Eeh.
Adịghị ahụ ọtụtụ ndị na - eme ndagwurugwu na - ekwughi na ọ bụ ihe ọjọọ - Ọtụtụ mmadụ mere ya na Maritzburg afọ a - Ọ ga - esikwu ike - Rossio na ndị ọzọ ole na ole - cannwere ike izere n'ezie dị mkpụmkpụ, oche oche dị arọ na igwe kwụ otu ebe, mana - ọ bụrụ na ị dina n'akụkụ ma chọọ ịnwale ya - mana gịnị ma ị lelee isiokwu anyị na 'Ga-adaba post'? Mee onwe gị ngwa ngwa '? - Enwere m igwe kwụ otu ebe abụọ ebe a, enwere ike ịkọwa ha abụọ dị ka igwe ịgba ọsọ marathon. Otu nwere oche oche na-adọrọ mmasị, nke ọzọ enweghị, nwere ọkwa oche nkịtị. M ga na-anwale ha ọzọ na-azụ na-ahụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie a dobe seatpost maka cross mba. (Techno Music) - Jmattias Folestad. 'Enwere m igwe kwụ otu ebe na Marzocchi Triple-8 RV na ya.' Mgbe m zụtara ndụdụ ahụ, ọ nwere ọtụtụ esemokwu esemokwu, yabụ, m mere ya ka ọ rụọ ọrụ zuru oke, yana mgbanwe mmanụ na mmanụ zuru oke.
Ọ ka nwere akụkọ ụfọdụ. Atụmatụ ọ bụla? '- Ọfọn m ga-asị na ọ nwere ike ọ dị ntakịrị mkpa ịgbanwe karịa ụdị ọrụ ọkụ. Oh mba, o kwuru na ya rụrụ ọrụ zuru oke - ee, mana ọ kpọkwara bushes na ndị dị otú ahụ - ee, ọ dị mma - m na-ekwu na ọ sịghị na ọ zụtara ndụdụ ọhụrụ ka anyị wee mara na ọ bụghị.
O kwere omume na ọ bụrụ na ọ dị ọhụụ ọ wughi ya na mbu.- Ọ bụ eziokwu.- themfọdụ n'ime ha na-arapara na mbụ.- Mana n'ozuzu, Marzocchi dị ezigbo ugo. - Eeh.
Echere m na ihe na-eme, aghaghị idozi ya, ee, enwere ike ọrụ zuru oke. - isiokwu mara mma maka anyị n'oge a. Jesicka Labud kwuru, sị: 'Abụ m nnukwu onye ofufe GMBN, adịla ogologo oge, - ọ dị mma. - 'na igwe kwụ otu ebe.' Agbanyeghị, ajụjụ m bụ, 'GMBN ọ ga-ewebata onye na-agba igwe / ọbịa?' - anyị enweela ajụjụ a ugboro ole na ole.
Ma ọ bụ eziokwu. Ee anyị na-agba mbọ ugbu a anyị n’agbalị ịchọta onye kwesiri. Ya mere, anyị na-anwa ịchọta ụmụ agbọghọ ụfọdụ anyị maara, dịka Annie Last, ebe anyị ga-eleta ụmụ agbọghọ a ma mee ọtụtụ akụkọ.
Atụmatụ ga-adị mma. - Kpamkpam. - Yabụ ee, maa oke oghe ka ihe dị ka. - Shay Benno. 'Gịnị bụ ihe mere igwe kwụ otu ebe na-abịa n'ihu n'ihu-aka ekpe-azụ-brekị.' M na-agba ịnyịnya na ụkwụ m na aka nri dị n’aka nri dị ka ọgba tum tum m .’- Ihu ihu bụcha ihe ndị Britain.
Na USA ọ bụ karịa ndị ọzọ. Ya mere echere m na Shay nwere ike ịbụ na US. Amaghị m ihe kpatara na ọ bụ, ọ bụ naanị ihe gbasara mpaghara, ọ bụghị ya? - Echere m na ọ bụ na mbụ, ogologo oge gara aga, echere m na o nwere ihe jikọrọ ya na akara ngosi ụzọ.
Yabụ ọ bụrụ na ịkwọ ụgbọala n'aka ekpe, ị nwere ihu ihu gị ka ọ na-agbasa n'aka nri, ihe kpatara nke a bụ mgbe ị na-adọfe okporo ụzọ, ihe mgbochi nke na-adịghị ize ndụ ga-abụ breeki azụ gị.- Ee.- Ka ị ghara ọgbaghara na njikwa .Ma echere m na nke ahụ bụ oge ochie. - ride na-agba ọgba tum tum na igwe kwụ otu ebe n'ezie, enweghị m ike iche n'echiche ime otu na nke ọzọ, ị maara, ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu, yabụ maka m ọ dị ka ọ bụ ihe okike na inwe breeki n'ihu n'akụkụ aka nri .
Eeh. Sam Onyeji 'Ọ bụ ezi echiche ịmaba n'ime ọdịiche ahụ wee mee ka ọdịda ahụ dị ngwa ka i wee nwee ike melite ebe dị anya na usoro na-enweghị itinye ibu?' - Nke ahụ bụ ezigbo echiche, m ga-asị na ụzọ kachasị mfe bụ eleghị anya ịme ya n'ụzọ ọzọ, ịmalite mmalite na-agagharị, mgbe ahụ ị ga-ewulite mkpọda kachasị elu ị nwere ike wee nwee ike ịmegharị ya.
Emere m nke ahụ dị ka onye nọ n'afọ iri na ụma, na pallets na ebe a na-adọba ụgbọala, naanị ị na-eme nnukwu mmadụ - Ee, ị na-agbanye ihe niile azụ mgbe ọ dị gị mma.- Kpamkpam, ee.- Ee, nke ahụ bụ nnukwu ederede ebe a, yabụ onye mbido unyi na-ewu ihe ederede site na blake, ezigbo mma, lelee nke a - Woah. Nwoke ebe a na-arịa ọrịa, unyi zuru oke ka e lie ya, taa bụ ụbọchị m gosiri gị otu ị ga - esi mee ya bụ maka iwuli elu na - aga n'ihu, otu na-aga n'ihu na, na dị nnọọ na-eweta niile nke nkà gị ọnụ.
Ma nke mbụ ị chọrọ otu n'ime ndị a. The Spade.- Ajụjụ na-esote sitere n'aka Hudson Carmouche, onye nwere Yeti nke anụ ọhịa isii. ọ nọkwa n’ahịa maka pike.
Rockshox pike ndụdụ, echere m. Ndụ dị na Austin, Texas ebe ụzọ ụkwụ dị 50% teknụzụ na okwute, yabụ teknụzụ mara mma, 'Ọ ga - aka m mma karịa 150 ma ọ bụ 160 mils? Pike? 'Ya mere, ọ bụ njem njem 5-anụ ọhịa, nke ahụ bụ 113 njem n'oge ahụ, n'ihu na azụ - Echere m na ị ga - apụrịrị na 140 ma ọ bụ 150, enwere m ike ịgaghị agagharị onwe m n'ihi na ị bụ mbụ Mee ka ntọala gị dị elu n'ezie gị handlebars elu. Na ogologo njem ndụdụ na ị na-eme, sthe ag ruru ga-n'ụzọ ụfọdụ mee ka ọ laghachi azụ, ma bike agaghị mgbe na-agba ịnyịnya nakwa dị ka ọ na mbụ e mere na obere njem. - Eeh, ọkachasị m chere na ọ bụrụ na ị gbasaa ihe, ọ ga - akara m mma ka njedebe dị n’obere ala, yabụ 150 na - ada m mma. - Ee. - You gaghị achọpụta na ọtụtụ ihe dị iche na agbanyeghị, echeghị m Frank Wilson gbanwere ndụdụ ya na ntụziaka onye nrụpụta ahụ, 'Ọ na-amasị m ka enwere mmetụta nke kilogram 10 nke nrụgide.' Mgbe m lechara ederede Doddy gbasara olu spacers, amalitere m ịjụ ma m ga-agbakwunye spacers kama? Echiche? '- - Ee, nwalee ha, nke ahụ bụ ihe ha chọrọ.
Echere m, ọtụtụ ụdị ndụdụ na-eso ụfọdụ n'ime ndị a, ha dị ọnụ ala ị nweta maka ndụdụ gị, yabụ nweta ụfọdụ ma gbalịa. - Ekwuru m mgbe niile na nkọwapụta ndị nrụpụta abụghị nke ziri ezi. Mgbe m kwuchara na azụrụ m, azaghị m ya, nwute, agbalịrị m otu Rockshox pike n'afọ gara aga ma achọpụtara m na nlele ha bụ eziokwu n'ezie, mana ọ dabere na ndụdụ ahụ, echere m.
Ọ bụ ezigbo ndu ịmalite. - Ee, adabaghị na ntuziaka ahụ nke ọma, jiri ha dịka ntọala ntọala wee dee ha ebe ị nọ, yabụ ị na-anwale. - Eeh.
Sam Millidge. 'Anọ m na-agba ịnyịnya m obodo ụzọ ụkwụ ihe dị ka ọnwa isii ugbu a,' M hụrụ ya n'anya. 'M ga-achọ ịgba ọsọ otu ụbọchị ma m nọ na-eche, sị,' Olee ihe ọma ị ga-abụ tupu oge eruo 'ị na-ekere òkè na agbụrụ enduro mpaghara? 'Adị m njikere inweta ụkwụ m' ma mesịa nweta, 'Achọghị m ka m mechaa kwụsị.' Echere m na ị ga-ebu ụzọ gbalịa agbụrụ obodo ị maara na ọ bụghị nsogbu ma ọ bụrụ na ịmeghị nke ọma - echegbula onwe gị - ị ga-ekpebiri onwe gị ọ bụghị ị pụta ma mee ya .- Emere m agba ọsọ ịnyịnya ígwè mbụ n'ime otu izu nke igwe kwụ otu ebe mbụ m wee gbanwee 28 si na 30, echere m mgbe m bụ 14, yabụ ubi ahụ esighi ike, mana onye na-eche? Ọ baghị uru - pụọ ebe ahụ mee ya - ee.
Paul Herberholz, 'Anọ m na-agba ịnyịnya 600 paụnd ihe dị ka otu afọ,' Kedu mgbe ị ga - akwado, bụ oge kwesịrị ịgbanwe ihe dị mma karịa? '- Echere m na mgbe ị malitere ime igwe kwụ otu ebe, n'ezie, m ga - akwado ịghara itinye ego gị belụsọ ma ị ga - eme ya. Ya mere, mgbe ịmalitere imebi ihe, kwalite ihe ndị ahụ na wiil na ihe ndị ọzọ. Ọ bụghị mgbe niile ka ị ga - azụta ihe ọhụụ, kedụ ihe ị na - eme? nwetara nwere ike ịbụ ezigbo mma maka ebumnuche ahụ. - Dị nnọọ ka m mere, a kụrụ ịnyịnya ígwè m dị ọnụ ala ka ọ nwụọ, ịnyịnya ígwè ọhụrụ a zụtara mgbe ọ dị mkpa ka a dochie ha, mgbe ahụ, mgbe otu afọ ma ọ bụ karịa, enwere m ike ịchọta ntakịrị ego iji chọta igwe kwụ otu ebe ka mma, mana o mere n'ezie mba ngwa ngwa, echeghị m otu ahụ. (Swoosh na-ada) - Oge maka ọkụ ngwa ngwa ebe anyị kwesịrị ịza ajụjụ gị maka n'ihi na ọ bụ iwu.
Henry Morelake. Kedu ihe ị chere nke onye nnupụisi ọjọọ? '- Dị ezigbo mma, mana m na-ahọrọ ndị na-esonụ. Olen Dobak. ' Enwere m ike iji ndụdụ Rockshox Lyrik na Fox DPX2 damper ọnụ? '- N'ezie ị nwere ike, ajụjụ nzuzu bụ. (ha abụọ chịrị ọchị) - Phil Adams, 'have nwere ihe ọzọ ị ga-eme iji buru ibu igwe kwụ otu ebe?' Nwere ike ịme ọzọ ọzọ, 'you nwere ike ịme nke ọzọ, oge ọzọ anyị ga-enwe oke snow?' - Anyị ga-enwe igwe mara abụba echi Mee edemede, Blake na-aga ịnyịnya igwe abụba, enweghị ike ichere ịhụ nke a - Anyị emela mana aga m ejide ume m iji mee snow n'ihi na anyị anaghị nweta ọtụtụ ya ebe a. - Ọ bụ ezie na m ga-achọ ime fatbiking na snow.
Da na-atọ ọchị. Tomkwe. Kweb, 'Mgbe otu awa nke nzọ ụkwụ, nri m pinky na mgbanaka mkpịsị aka ada, ọ bụla aro?' - Ogwe aka gị nwere ike ịdị obere, na-ada ka ị na-ebu ibu dị ukwuu n'aka gị, ma ọ bụ ịnwere ike ijidesi ike. - Ikekwe.
Enwere ike ịbụ ọtụtụ ihe, echere m. Ọ naghị enye aka, ọ bụ? - mba Ndo. - Bịanụ. - Ọ bụ ngwa ngwa ọkụ.
Teo Barrachin. Nwere ike ịnya ịnyịnya igwe 26 nke anụ ọhịa na ndụdụ 27-inch? ' - Ị nwere ike. You ga - eme ihe - amaghị m ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ihi na n'ụzọ ụfọdụ, ọ bụghị nke a haziri maka nke ahụ. (Neil na-achị ọchị) Nke ahụ bụ azịza ọsọ ọsọ, ogologo oge na-akọ banyere nsị ndụdụ, mana ma eleghị anya nke ahụ bụ ihe dị iche na - fork offset, na-ada ka ị na-ekwu ihe na-adịghị mma.
Matthew Jaggard. 'Gini ka i chere banyere LaPierre Spicy 327?' Enweghị m echiche ọ bụla. Ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe. (ha abụọ na-achị ọchị) - Don, amaghị m banyere ya - Steven Smith. “Makesnye na-eme ụda ụda ụda kachasị mma?” - Oh, Amaghị m, nke ahụ bụ ezigbo ajụjụ.
Olileanya na-eme ka ụlọ ọrụ na-eme mkpọtụ. Ma ọ bụ onye ọ bụla na-enwe mmasị n’ebe ugwu na-ada ụda? Anyị kwurịtara banyere ebe dị jụụ dị mma ọkachasị mgbe ị na-agba ịnyịnya rụrụ arụ - Chris King hubs na-ada nke ọma - Ee, nke ahụ dịka ezigbo ụlọ ehihie - A bit classic, right? - Guillio. Enwere m ike ịkọwa ụzọ mil 200? Gabel 'na m 2014 ọkachamara Enduro 29er?' - Ee, ị ga - emeli ya.
Ma ọ bụghị. - Ma ọ bụghị. (Abụọ ọchị) (Swoosh mkpọtụ) - Ọ dị mma, yabụ ugbu a ọ bụ oge iji dozie m ma ọ bụrụ na m mehiere site na ntuziaka ole na ole, nke a sitere na Finley Hawkins onye dị afọ 13 wee gbalịa ịbawanye elu na ntopute ya.- Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nzọụkwụ dị elu, m ga-asị.
Nke ahụ dị mma, ọ bụ ezigbo nha n'ebe ahụ. - Nnukwu agadi. Ee, enwere m mmasị na nke ahụ, ọ dị mma.
Echere m na ị nwere ike ịlaghachi ntakịrị n'ihu mgbe ị na-apụ, mana enwere m mmasị ụdị ahụ, ị ​​hụrụ, mgbe ị na-eme ya, ụkwụ azụ gị na-apụ, ị biliri ọtọ nke ọma n'ihi nke a ga-enye gị mgbe niile gbalịa ịlaghachi n'ụgbọ ịnyịnya ígwè ntakịrị n'ihu mgbe ị na-apụ ma na-eguzo n'ihu, ị ga-enweta ogo ụfọdụ, mana ọ dị mma innit Doddy, gịnị ka ị chere? - ee ọ bụ ezigbo mmalite echere m - Mee ya nwayọ nwayọ, ọ dị elu. Lee nke a, mara ezigbo mma - Nke ahụ dị mma, ọ bụghị ya? - Fourkwụ anọ ma ọ bụ ise n’èzí Ejila onwe gị sie ike, nke a dị mma nke ukwuu. Ma ee, m ga-anwale obere ndụmọdụ, enwere olile anya na nke a ga-enyere gị aka. (Swoosh ụda) - Ya mere, ọ bụ maka izu a frag, ya mere, jide n'aka na ị na-eziga ajụjụ gị, M hụrụ n'anya na-eme, ọ bụ otu n'ime ọkacha mmasị m isiokwu nke izu. - Ee, ọ dị mma.
Gbalia iziga ajụjụ ndị a ask@gmbn.com na dịka Neil kwuru, kwuo okwu ndị a n'okpuru - Olileanya ugbu a ị chọpụtala na ọ bụ izu izu ụka na ọwa. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ edemede wacky pịa ebe a ka Blake bụ onye iberibe na-egosi anyị ụfọdụ aghụghọ - ee, na ebe a mgbe ị hụrụ igwe kwụ ọtọ nke Will Martin.
Yabụ nke a bụ nchịkọta igwe kwụ otu ebe kachasị mma - denye aha anyị ma ọ bụrụ na ịnweghị ịpị akara GMBN na mkpịsị aka aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a.
Kedụ ka ị ga - esi edozi hydraulic brake levers?
OhanezeigweNjirimara nan'ihu breekiejiri lever n'aka ekpen'akụkụnke aka na azubreekiN'aka aka nri.Jenụwarị 8 2020bọchị 2020
breeki diski na-adọkpụ bụ nsogbu nkịtị na ọbụlagodi obere esemokwu nke nwere ike ọ gaghị eme ka ị daa mbà ma ka na-akpasu gị iwe, nke a bụ nkwekọ hydraulic nke breeki diski na ihe ọ bụla na-eme ma ọ bụ ihe atụ isiokwu a ga-enyere gị aka iwepụ nke ahụ esemokwu esemokwu Hey I trim on the Parktool Hydraulic Brake Line Ọ bụ usoro dịtụ mfe, mana enwere ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka mpempe akwụkwọ ahụ ete. Ya mere, anyị na-amalite site na ịchọpụta nsogbu ahụ wee na - ejegharị gị site na nhazi usoro site na nkwụsị, ọ bụrụ na ịnwe igwe eji arụ ọrụ nke eriri na - ahụ maka isiokwu a maka ngwa mgbakwunye Ngwaọrụ na ngwa nwere 4 ma ọ bụ 5 millimita Allen igodo ma ọ bụ T25 torque spana dị ka a TW 5.2 a ìhè iyi ka backlit na caliper na a ụzọ kickstands ma ọ bụ a ụzọ jide igwe kwụ otu ebe mgbe wheel na-tụgharịrị mbụ, na igwe kwụ otu ebe ga-ebuli, bugharia na wheel na-ahụ oghere dị n'etiti breeki diski na breeki breeki na nyocha anya ebe mpempe akwụkwọ breeki ndị ahụ ka nwere ọtụtụ ndụ mana a ga-edochi mpempe akwụkwọ ndị ọzọ, lelee isiokwu a ọzọ iji mụta otu esi atụle uwe na dochie pads ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa anyị ga-atụle onwe anyị na nhazi ahụ na ihe atụ a enwere obere abrasion rotor na ihe ndị yiri ya enweghi oke mkpọtụ ọ bụla ka ị nwee ike ịkpọ naanị ihe ọma a, mana ọbụlagodi na ị ga-eji ejiji dị mkpa ka anyị mara ihe ndị ọzọ nwere ike ibute ma ọ bụ Na igwe kwụ otu ebe na-emeghe ọdịda, impeller nwere ike ma dozie nsogbu ọbụna na-arụ ọrụ na thru-axle wiil A rotor rotor na-egosi ọtụtụ ihe na-aga n'akụkụ na nke a na-eme ka idozi pad ahụ siri ike ma ọ bụ agaghị ekwe omume rotor bụ ezigbo nhọrọ, mana ụfọdụ ntụgharị nke rotor nwere ike ọ ga - ekwe omume na usoro a bụ dị ka nke a gosipụtara na isiokwu ọzọ, ị kwesịrị ịlele rotor ma ejiri ihe ntanetị wepu ma ọ bụ na - etinyere ya ma ọ bụ na - agbanye mgbanaka isiokwu ọzọ Nke anọ rotor echichi Fourkpọchi play na ehiwe nwekwara ike-adị mfe enyocha, dị nnọọ mkpatụ wheel azụ na-apụta dị ka e gosiri, mgbe play bụ ugbu a, nsogbu ọzọ bụ mgbe ustjá na irighiri ihe na-ewuli elu na otu ma ọ bụ abụọ nke pistons na na-akpata ihe nnyapade pistons ka na-enyere gị aka inwe kwesịrị ekwesị itinye n'ọnọdụ n'ọtụtụ ọnọdụ, ma maka ozi ndị ọzọ lelee a ọzọ isiokwu, na ọ bụ n'ihi na, mgbe niile nchoputa Ka anyị banye n'ime itinye n'ọnọdụ usoro itinye n'ọnọdụ usoro bụ sam e maka n'ihu na n'azụ brek-atọpụ arịọnụ kposara ruo mgbe caliper ahụ nwere ike ịkpali kpamkpam mpụta dị ka iche, na ụfọdụ anyịnya igwe na-arịọnụ kposara na-emi odude n'okpuru strut ma ọ bụ na a mgbodo.
Ugbu a, anyị pịa breeki lever na itinye n'ọnọdụ Chebe arịọnụ kposara na zuru torque nke isii na asatọ Newton mita na ọrụ gị zuru ezu, ma ọ bụrụ na mpe mpe akwa ka na-ete anyị kwesịrị ime ụfọdụ mgbanwe dị mma Loosen na ịgbanwe otu ịghasa na oge, belụsọ na enwere oghere dị n'akụkụ abụọ nke rotor. Jiri nlezianya jiri mkpịsị aka gị na ngwaọrụ gị rụọ ọrụ mgbe ị na-arụ ọrụ n'akụkụ wiilị na-agba ogho, ozugbo ihe mgbochi breeki anaghị etecha ya kpamkpam, na-eme ka eriri ọ bụla na-arị elu isii ruo asatọ Newton na Usoro bụ Complete Nye ezi itinye nke bolt isi, ma ọ bụrụ na mgbe na-agbalị niile nke ndị a na usoro ihe ọ bụla yiri ka na-arụ ọrụ maka kwesịrị ekwesị itinye n'ọnọdụ, e nwere ike nsogbu na gị caliper arịọnụ usoro. A na-eche na a na-arụzi ihe mkpuchi ahụ n'ụzọ ziri ezi na n'akụkụ aka nri na rotor, ma ọ bụrụ na brackets abụghị ndị na-ere ahịa igwe kwụ otu ebe nwere ike idezi ma ọ bụ dezie a ga-ezukọta na Park Ngwá Ọrụ DT 5.2 iji melite nhazi ahụ sonyere anyị na diski hydraulic diski. itinye n'ọnọdụ, ọ bụrụ n'isiokwu a nyere gị aka biko kọọrọ ya ndị enyi gị ma denye aha na ọwa anyị Oge ụfọdụ ọ na - ewe ntakịrị ihe ọmụma iji buru ndị enyi gị ma ọ bụ ndị ahịa gị rute n'ọzọ ọzọ maka ekele ahụ
Kedu akụkụ akụkụ breeki levers kwesịrị ịbụ?
Na-eche ihu naleversna ọnọdụ dị ire ụtọ na-atụgharị nkwojiaka gị n'azụ ogwe osisi, na-enye gị ohere ịkwanye ihe ntụchi ahụ na n'elu ọnụ ọnụ, ma nyekwuo nchebe mgbe ị kụrụ akpụ ndị ahụ. Anyị agaghị agarịrị ala karịa ogo 40 site na ntanetị ma na-etinyekarị anyị na gburugburu ogo 20-30.19.08.2017
Ugbu a, ọ bụ ihe nkoropụ na a naghị agbazi levers levers. Ọ na-aga na isi gị. Ugbu a ọ dị ezigbo mkpa ijide n'aka na ndị na-atụgharị breeki gị dị n'ahịrị, gịnị kpatara ya? anyị na-agbago na oge wee jụọ onwe anyị ma ha adabaghị na ibe ha ma ọlị? Taa, m ga-egosi gị otu esi atụ ha ka ha kwekọọ n'ụzọ zuru oke. (Hip hop music) Ya mere, gịnị kpatara ya? Anyị ekwesiri ijide n'aka na ha dị larịị ma nọrọ n'ahịrị? Ọfọn ọ na - enyere aka igbochi mmerụ ahụ, ahaghị nhata, adịghị mma kwụsie ike, ọbụnakwa na - enye gị nduzi dị mma.
O were nkeji ole na ole iji chọpụta ma gbanwee, yabụ gịnị ma ị mee ya naanị? ime? Ugbu a ọbụlagodi akụkọ ntụrụndụ Eddy Merckx bụ ihe nro na-atụgharị n'ọnọdụ ya. Ọ nọ na-amaja ndị ọrụ ya oge niile maka teepu na ngwa ọrụ ya, ọbụlagodi n'oge agba ọsọ na-anọpụ iche ọ ga-akwụsị, jidere eriri, ma na-atụgharị uche na-eche na ihe adịghị mma. Eddy gwa onwe gi gini, Eddy, ma oburu na
COMMUTER igwe kwụ otu ebe
Ka ị na-ele, isiokwu a bụ maka gị na ndị ọzọ na-ege ntị. (Hip hop music) Yabụ kedu ka anyị ga - esi mee nke a na - enweghị lasers na mma gear? Ka anyị bido site n’itule ndị levers ahụ. E nwere kpochapụwo nwere otu anya mepere, otu anya mechiri ma lelee ma ọ dị ọkwa.
Nke ahụ bụ nke ọtụtụ n’ime anyị nwere ike ime. Ugbu a ka mma karịa teknụzụ nke ejiri otu anya meghee ma mechie anya ya, otu a, ọkwa mmụọ dị ike. Nwere ike nweta ha n'ọtụtụ ụlọ ahịa ngwaike ma ọ bụrụ na inwetabeghi ya, ọzọ kụọ aka n'ọnụ ụzọ onye agbata obi gị ha nwere ike inwe, yabụ, ị ga-ebu ụzọ hụ na igwe kwụ otu ebe gị kwụ ọtọ, ọ bụghị na Ndahie ma ọ bụ mkpọda.
Nwere ike iji ọkwa mmụọ lelee nke a. N'okwu m, enwere m obi ụtọ, enwere m nguzo ọrụ siri ike. Bikegbọala a agaghị agagharị ma ọ bụ gaa ebe ọ bụla.
Ọ bụrụ na inwere ya, ị ga-etinye ya n’elu mkpuchi ya na akụkụ ya abụọ kpọmkwem n’otu ebe. Enwere m obi uto n'ezie enwere m ụfọdụ ugwu na mkpuchi ndị a ka m wee gụọ ha ka m wee mara na nke ahụ bụ otu ebe. Mgbe ahụ ihe niile ị ga - eme bụ ile anya ebe ọkwa afụ ahụ dị wee gbanwee otu lever iji kwekọọ na nke ọzọ.
Agbanyeghị, ihe ga - eme bụ mgbe ị mechara bulie njedebe ikpeazụ na lever, onye na - agụ ya nwere ike ibuli elu ntakịrị ka ịchọrọ iburu nke ahụ n'uche. Ọ nwere ike iwe obere mbọ, mana ọ karịrị ya. Ọ bụrụ na ịnweghị ọkwa mmụọ ugbu a, ma ọ bụ na ị maghị ma igwe kwụ otu ebe gị zuru oke ma ị nwere nro na ya, were onwe gị otu n'ime mpempe akwụkwọ ndị a.
Onye dị otu ahụ na-agbanwe agbanwe dị mfe iji karịa igwe eji arụ ọrụ igwe dịka ọ naghị ehulata ma ọ bụ gbagọọ, nke zuru oke maka ọrụ. Ihe ịchọrọ ime bụ ijide ya n'okpuru mkpuchi ihu igwe, gbanye ya ozugbo, mgbe ahụ ị ga-agbanye ya na teepu aka wee tụọ ya na njedebe nke aka ahụ. Mgbe ahụ nweta mmesho a ma megharịa ya n'akụkụ nke ọzọ, yabụ na mpempe akwụkwọ breeki ọzọ, ju gbaa mbọ hụ na ọ dị n'otu ebe.
Ọzọ, onye na-ebu ya nwere ike ibuli obere mgbe ị na-eme ka ọ sie ike, yabụ dịrị njikere ịme ya oge ole na ole, ị ga-ahazi gị, mgbe ahụ, ndị na-ebugharị gị dị larịị. N'ihi gịnị? Ọ dị mma, iji zere olu, azụ na ubu mmerụ na iji melite njikwa nke igwe kwụ otu ebe, kanye akara n'elu mkpuchi abụọ ahụ, nke yiri ya, yabụ n'otu ebe ahụ, wee were teepu gị ma ọ bụ onye ọchịchị, mana ọ ga-abụ ihe ziri ezi ma tụọ site na akara ahụ ma etiti etiti ma ọ bụ otu n'ime mkpọchi mkpọ ma megharịa usoro a n'akụkụ nke ọzọ.
Mgbe ahụ, ihe ị ga - eme bụ ịgbanwe igwe mmụba ahụ ị chere na ọ naghị atụ aka ozugbo ma ọ bụ na ntụsara ahụ kachasị gị mma. Ọzọ otu anyị siri mee ka ndị levers ahụ nwee ike ime ka ha dị larịị, ha nwere ike ịkwaga ntakịrị ka o wee nwee ike ịnwale ntakịrị iji hụ na nha ndị a bụ otu, mana ọ bara uru karịa n'ikpeazụ. Ugbu a na ihe ndị dị n'okpuru, mee ka m mara etu ị si tọọ ntọala gị, maọbụ ọ bụrụ na ị nweela ọdụ ụgbọ ma ọ bụ mmerụ ahụ n'ihi ịkọwapụta, m ga-enwe nnukwu agụụ ịgụ nke a, dịka Eddy Merckx, eze nke tinkering ahụ ga-eme. onwe gị.
Ugbu a echefula ịkọrọ ndị enyi gị ma nwee mmasị n'isiokwu a ma denye aha na Global Cycling Network, pịa ụwa na ihuenyo ugbu a na maka nnukwu isiokwu abụọ ọzọ, kedu maka ebe a n'okpuru maka Why Do Procyclists Slam Ha ịkwụ na ala ebe a maka Slammed vs. Na-abụghị Slammed. Nke a bụ gbawara.
Kedu aka bụ breeki na igwe kwụ otu ebe?
Na U.S., iwu chọrọ ihe niileanyịnya igwena-ere n'aka ekpeakana-achịkwa ihubreeki, na nriakaazụbreeki. Ọ bụ otu ihe ahụ na France. N'Itali na Great Britain, ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu.Eprel 23 2021
Breeki aka ekpe ka ọ bụ aka nri?
Nabreekipedal dị n'ala naekpenke osooso. Mgbe enwe, ọ na-emetụta ndịbrekị, na-eme ka ụgbọala ahụ kwụsịlata na / ma ọ bụ kwụsị. Ikwesiri iji nke ginriụkwụ (gị ikiri ụkwụ na ala) na-akpa ike na pedal ime kabrekịitinye aka.
Gịnị mere na my hydraulic brek anaghị arụ ọrụ?
A ida nke ike nwere ike ịbụ n'ihi na ọtụtụ ihe. Nwere ike ịnwe ikuku na sistemụ ahụ ma chọọ ịgbaji breeki gị, pads gị ga-eyi oke oke, rotor gị nwere ike ịbụ ihe ruru unyi, ma ọ bụ pad gị ma ọ bụ rotor nwere ike merụọ.4 jan. Dec 2019
Kedu igwe breeki dị mkpa karịa?
Na ịnyịnya ígwè, dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ụgbọala ndị nwere ụkwụ agba, n'ihubreekibụka mkpama dị irèbreeki. Ihu n'ihubreekisite n’onwe ya ga-akwụsị igwe kwụ otu ebe nke agba ọsọ ọsọ dị okpukpu abụọbreekisite n'onwe ya.
Olee mkpịsị aka ole ihe eji ejide breeki nwere?
leversE wuru maka 4mkpịsị aka braking. ọbụna mgbe ahụ ọ gaara adị gị mma karịamkpịsị aka. na mbata Vbrekịna mgbe e mesịrị na igwe diski,leversmgbe ahụ e wuru nke abụọmkpịsị akaafanyekwa.06.11.2012
Kedu nke na-ejide bọlbụ agbaji?
Na United States, iwu chọrọ ka ejiri aka ekpe rere igwe kwụ otu ebe niilena-achịkwan'ihubreeki, na aka nri na azụbreeki.
Kedu breeki ị kwesịrị iji jiri nwayọ nwayọ?
Downshift. Arsgbọ ala nwere ntuziaka nnyefenwere ikemee ngwa ngwa site n’obutu n’obere ngwa ngwa. Kpachara anya ka ị ghara ịgbagharị na mberede dị ka nke dị alanwere ikemechaa megharia injin gị ma mebie emebi.Jiriadọba ụgbọalabreeki.26.10.2020
Kedụ ka ị ga - esi edozi igwe mgbaji n’elu igwe kwụ otu ebe?
Dori aka gi n’elu wee seta mkpịsị aka gị. Ikwesiri ime nke a n'udo. Ọzọkwa, dị njikere na mkpịsị aka gị dabere na mpụta nke lever. O kwesịkwara ịmepụta usoro kwụ ọtọ yana aka na ogwe aka gị. Ma ihe ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-emekarị bụ ịtọ ndị levers n'ime, n'ihi ya, ha ekwesịghị ịgbatị ọtụtụ.
Kedu ihe kpatara ị ji etinye ogwe aka breeki n'aka nri?
Ọ bụ ezie na imirikiti braki gị ga-abịa site n'ihu, itinye ya n'aka 'ike ọgwụgwụ' na-ebelata ohere nke akwa akwa na njigide na-eziga gị n'ofe. Aga m aka ịdọgharị ọdụ USB na azụ na aka nri.
Gịnị na-achọ gị breeki levers?
Ihe ọzọ ị ga - ele anya bụ ịgbagide ma ọ bụ gbadata na nkwonkwo aka gị nke ga - eme ya breeki gị ga - adị elu ma ọ bụ dị ala. Mkpịsị aka gị kwesịrị inwe ahụ iru ala na ọkụ dịka aka gị, ịkwesighi iche ka ị na-agbatị ma ọ bụ gbalịsie ike imetụ ihe mkpuchi gị.